Maxa dhacay kaddib aqoonsiga Qudus caasimada dadka Yahuuda , shirkii jaraa’id Trump & Netanyahu iyo banaanbaxyo. – Idil News
Maxa dhacay kaddib aqoonsiga Qudus caasimada dadka Yahuuda , shirkii jaraa’id Trump & Netanyahu iyo banaanbaxyo.
Madaxweyne Trump ee Mareykanka shir jaraa’id ayuu caawa ku aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus iney tahay Magaalo Israa’iil, isagoo ku bilaabay hadalka waxaan go’aansaday aqoonsiga Qudus caasimada Isra’iil.
Ra’isul wasaaraha Yahuuda Netanyahu ayaa isna warsaxafadeed ku qabtay Qudus ” Waligeed ayey caasimad noo eheed Qudus sedex-kun oo sanno ayey noo eheed caasimad , dhulkii nabiyadeena iyo boqoradeena- waligeed ayey eheed rajadeena & riyadeena ee dhamaan umadda Yahuuda ee caalamka soo laabto kusoo noqda Israa’iil.
Boris Johnsan wasiirka arrimaha dibadda Uk waxu yiri waa welwel cusub.
Falastiin waxey sheegtay in dagaal ay gali doonto.
Turkiga waxa uu ku dhawaaqay shir degdeg ah oo dalalka Muslimka isugu imanayaan .
Therse May Raisul wasaaraha UK waxey tiri marna uma rarayo safaradeeda Qudus.
Shiinaha iyo Ruuska waxey ku shegeen dagaal cusub oo laga hurinayo barriga dhexe.
Falastiiniyiin carreysan oo gubay sawirka Trump.
Eeda ugu badan ee go’aankaan iyo faragalinta barriga dhexe ayaa lagu dhaleceeyay wiilka uu sodoga uyahay Trump ee Jared Kushner oo ah Yahuud iyo xitaa Trump oo asalkiisa uu ku abtirsado Isra’iil.
Marka lagareebo Turkiga oo si cabsi la’aan ah u hadlay ma jirto dal carbeed oo ka hadlay si toos ah arrimaha Falastiin ee Qudus.
Hogaamiyayaasha dalalka carbeed ayaa u sabab ah aamusnaantooda xukunka oo ay isaga fadhiyaan iyo iyagoo ka baqayo in lagu kiciyo mucaarado saldanadooda.
Kumanyaal kun oo Turki ayaa caawa isugu soo baxay safaarada Mareykanka dalkaasi iyagoo ku dhawaaqaya Alaahu Akbar waxaana amaanka goobta la wareegay Cidamada Turkida.
Qudus ayaa ah magaalada ugu danbeyso ee dhamaadka dunida marka muslimiinta iyo kiristinka diimahooda uu kala qeexi doono nabi Ciise CS kadib soo ifbixida Masih Dijaal iyo soo dagista imaanshaha Nabi Ciise -taa ayaa ka dhigeysa muhiim dhanka islaamka iyadoo diinta Yahuudana Judaism magaalada Qudus ay ku fareyso iney ku sugaan Nabi Ciise oo ay ka helayaan garab iyo gargaar sida uu qorayo kitaabkooda.
Goob xabbiibkeena Muxamad NN ha ahatee laga dheelmiyay iyo masaajid u ah halboole dunida muslimka oo ka dhigan Masaajid ugu kheyrka badan kaddib xarameynka.